← Waxgaradka Muqdisho oo Maanta kulan ay ku yeesheen Muqdisho ku taageeray Maamul goboleedka Banaadir State
Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG oo Faahfaahiyey Qaabka Doorashada Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha →
Nairobi (MMG) War bixin ay soo saartay maanta oo jimco ah, Hay’adda u doodda xuquul-aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in Somalia aysan ahayn goob nabad ah ool ay ku noqon karaan qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xeryahah Kenya. Hay’addu waxay sheegtay in mas’uuliyiinta Kenya aysan dib u celin karin qaxootiga sababo ay ugu wacan tahay dagaallo iyo xad-gudubyo ka dhan ah dadka rayidka oo ka socda goobaha ay ciidamada Kenya iyo maleeshiyada la socota ay xoreeyeen ee ku yaalla koonfurta Soomaaliya.
Daneil Bekele, agaasimaha hay’adda Huma Rights Watch ee Africa ayaa sheegay in dagaalldaa koonfurta Soomaaliya ay wali halis ku yihiin dadka rayidka ah, wuxuuna sidoo kale sheegay in Kenya intii ay tabin lahayd warar been ah oo sheegaya in goobaha xadka ku dhow ay nabad-yihiin, looga baahan yahay inay diirada saarta sidii loo taageri lahaa loona ilaalin lahaa qaxootiga Soomaalida. Kenya waxa ay dhowr jeer codsatay in laga qaado dalkeeda qooxtiga Soomaalida, kuwaas oo saameyn dhinac dhaqaale iyo ammaan ku leh dalkeeda.
Waxana ay arrintaas timid markii ay ciidan u dirtay koonfurta Soomaaliya bishii October sanadkii hore. Ugu dambeyn, Hay’addu waxay sheegtay in Kenya intii ay ku celin lahayd qaxootiga goobahaasi ay taa baddalkeeda dib u furto xarumaha qaxootiga lagu qaabillo ee Libooyo isla markaana ay dib u bilowdo diiwaangelinta qaxootiga cusub ee Kenya galaya.
Xeryaha qoxootiga dalka Kenya waa halka ugu badan ee aduunka ay ku nool yihiin qoxooti, waxana badankood ay ka soo carrareyn dagaalada iyo abaarah ka taagan dalkooda. Waxa masuuliyiinta codsaday in ay dib u laabtaan qoxootiga Soomaalida ka mid ah wasiirada arrimaha dibedda iyo amniga ee Kenya Mosas Wantagula iyo Gourge Seytooti ayaa labaduba sheegay in ciidamada Kenya ay Somaaliya dhexdeeda ka sameyeen goob nabad ah oo ay qaxootigu dib ugu noqon karaan.
Ma cadda sida Kenya ay u qaadan karto codsigan ay u soo joodisay maanta hey’adda xuquuqda aadanaha ee HRW. Dhinaca kale Kenya waxa ay si rasmi ah ugu biirtay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, kuwaas oo ciidan gaaraya ilaa 4,660 askari ay u soo dirtay, waxana ciidaankaas uu xoogiisa ka howlgali doonaa koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Gedo iyo Jubooyinka. Moment Media Group———————— Xafiiska Wararka Nairobo